Izu 7, Ahụhụ Ọjọọ, na Mwepụta Ngwanrọ Na-aga nke Ọma | Martech Zone
Nke a bụ izu 7 na ọrụ ọhụrụ m ma ọ bụrụla izu na-enweghị atụ iji mee ememe. Nke anyi Nhazi Onlinentanetị na-agbado iche site na igwe asọmpi ebe ahụ ma na-eme ya ngwa ngwa. Izu na-abịa anyị na-efega Tampa ịgwa ọzọ ụlọ oriri na ọranchụranchụ aha, otu n'ime ndị kasị ibu na mba.
Ihe na-adọta ndị ahịa a dị mfe. Anyị na-enweta iwu ka ụlọ oriri na ọ restaurantụ theụ. Nke ahụ bụ ihe ọ gbasara, nri? Mgbe ị nyere iwu n'ịntanetị, ị na-atụ anya ịnata ngwaahịa - ngwa ngwa na n'ụzọ ziri ezi. Fọdụ asọmpi ahụ metụtara onwe ha na-enweghị isi ma na-enweghị isi. Agbanyeghị na ha dị oke mma, ha anaghị enweta iwu n'ụlọ nri. Ọ bụrụ na ị na-enweghị ike inye ihe ziri ezi iji, na oge, na-n'aka na ọ mere ya… mgbe ahụ i kwesịrị nanị pụọ nke azụmahịa.
Enwere ụfọdụ ụlọ ọrụ 'ofufe abalị' nke wuru ebe a na-arụzi ụgbọala ebe a, ma ụlọ ọrụ ndị ọzọ nọ ebe ahụ nwere nnukwu echiche mana ha enweghị ike ịnapụta ha n'ihi na ha enweghị ikike ma ọ bụ ndu. M banyere n’otu ụlọ ọrụ nwere ihe kacha mma. Anyị nwere ọrụ ụlọ ọrụ na-eru nso, ndị na-atụ anya ụkpụrụ ụlọ na ndị mmepe, yana ọtụtụ oke agụụ iji tinye ya niile.
Malite, Okporo ụzọ mere mkpebi ụfọdụ maara nke ọma itinye ego na ndị nwere ọgụgụ isi, ihe ngwọta siri ike, wee malite ịrụ ọrụ na ụlọ ọrụ ahụ. Ọ na-amalite ịkwụ ụgwọ. Ihe owuwu dị n’azụ njikọ anyị na Point-of-Sales bụ usoro izipu ozi nke ndị na-ere ahịa buru ibu n’ụwa ga-anya isi. Naanị ihe ụlọ ọrụ anyị kọrọ bụ a technologist iduzi okporo ụzọ… nke ahụ bụ ebe m batara.
Echere m na ọrụ m dị ka nwa okorobịa ahụ na-efe ọkọlọtọ na Nascar. Adịghị m nke ọma dịka ndị ọkwọ ụgbọala na-agba ọsọ, ma ọ bụ ndị nwe ya, ma ọ bụ dị ịtụnanya dịka ihe dị n'okpuru mkpuchi. Mana ana m elekwasị anya n’ọsọ ahụ, na-ewelite ọkọlọtọ edo edo mgbe anyị nwere nsogbu, na-efegharị nke na-acha ọbara ọbara mgbe anyị ga-akwụsị, ma na-efe ọkọlọtọ a na-echekwa mgbe anyị mere oge anyị. Ọ bụ ihe ịma aka dị egwu mana ana m agbawa agba gburugburu ndị a! Na nwa nwoke anyị na-aga ngwa ngwa!
N'ime izu ole na ole gara aga ndị mmepe anyị mezue ma wepụta Call Center Enterprise Integration nke Kpọọ Centre anyị kpọrọ nke kacha mma ha hụtụrụla. Ọ bụ mbụ m ngwaahịa imewe na Okporo ụzọ, ya mere ọ dị m ka ọ dị anyị mkpa ịkụ ọsọ ụlọ. Otu mmepe ahụ weere ihe m chọrọ wee wuo ọtụtụ nkwalite nke karịrị ihe niile m tụrụ anya ya. Ọ na-arụ ọrụ n'enweghị ntụpọ na scalable maka ọtụtụ ojiji ndị ọzọ.
Nnabata nzukọ bụ otu n'ime ihe ọchị kachasị m gara… enweghị ajụjụ ọ bụla ma ọ were 10 nkeji oge. Anyị gosipụtara ngwa ahụ ma ha nakweere ya. Emela!
Anyị wepụtara mmemme azụmaahịa email onye ọkwọ ụgbọ ala maka ndị ahịa ahịa ụlọ nri mba. Enyere m mkpịsị ugodi ka mbanye ka izipu ozi ahụ na imewe email ahụ. Nsonaazụ mbido bụ ụlọ ọrụ nzaghachi B2B ụlọ ọrụ abụọ.
Anyị weghaara ọrụ anyị ugbu a taa wee kpochapụ mkpokọta ikpeazụ amaara na ngwa ahụ. Anyị na-agbasi mbọ ike ugbu a na nkwalite, na-eme atụmatụ maka mgbanwe akụrụngwa (tupu achọrọ ha) yana ịmepụta nsụgharị nke ngwa ahụ (tupu a rịọ ha). M na-agbagha onwe m ka m na-elekwu anya na akụ niile na ijikwa ọtụtụ ndị anyị na-arụrụ anyị ọrụ, mana ọ bụ izu 7 dị ịtụnanya!
Mmadu tuo m aka!
Tags: ebayLinkedInọchụchọ ịzụ ahịa na mpagharamilomilo ikwoMbido njikọ
Enwere m Verizon PPC 6700 na m gaara enwe mmasị ịme ihe a…
Ọkt 10, 2007 na 11:54 AM
Daalụ, Doug. Ịgụ nke nyere m ọgazị bumps!
Ọkt 10, 2007 na 10:46 PM
Daalụ Julie! A gọziri m n’ezie ebe m chọtara ọgbakọ were m n’ọrụ, tụkwasị m obi ma nye m ike ime mgbanwe ndị m chere na ọ dị mkpa. Ọ bụ ihe ịtụnanya mgbe niile ihe ndị ọrụ ga-eme mgbe ị hapụrụ ha!